Land for Sale in South Okkalapa - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Lands for Sale in South Okkalapa
Township South Okkalapa
မြေကွက်၊ (40 × 60) ပေ၊ ဝေဇယန္တာလမ်း နှင့် သစ္စာလမ်း အနီး၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်
09790272000 , 09790273000
Ad Number S-8132693
Everywhere Real Estate Close
​ေက်ာ္​သူလမ္​း၊ ​ေတာင္​ဥကၠလာ၊ 9ရပ္​ကြက္​၊ 40'x60'၊ ​ေျမ၊ ဂရန္​​ေျမ။ အုတ္​ခတ္​ၿပီး၊...
2,700 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8132577
3,000 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8131117
Asia Land Real Estate Service Co.,Ltd Close
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ရတနာလမ္းမႀကီးအနီး (40'60') အတြင္းေထာင့္ကြက္ အေရာင္း သိန္း၁၆၀၀...
1,600 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8125929
SWEET LIFE CAMP REAL ESTATE SERVICES CO.ltd (REGISTRATION NO 120341464) Close
Ad Number S-8125659
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရတနာလမ်းမကြီးအနီး မြေကွက် အမြန်ရောင်းမည်။ (၂၀*၆၀) အကျယ် ။ ဂရံမြေ။...
690 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8123975
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် သစ္စာလမ်းမကြီးအနီး မြေကွက် အမြန်ရောင်းမည်။ (၂၀*၆၀) အကျယ်။ ဂရံမြေ။...
Ad Number S-8123956
ဝေဇန္တာလမ်းမကြီးအနီး 6ရပ်ကွက် တောင်ဥက္ကလာပမျြို့နယ် B3 20*60...
Ad Number S-8122867
ေပ-၂၀,ေပ-၆၀ ေနာက္တြင္ေျမပိုေပ -၄၀ပါျခံကြက္ ေျမကြက္ ေရာင္းရန္ရွိသည္၊
1,750 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8122284
မြေကွက်၊ (40 × 60) ပေ၊ ဝေဇယန္တာလမ်း နှင့် ဗြမစိုရ်လမ်း အနီး၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်
Ad Number S-8120559